Amaqiniso we-Google - Ukusesha Okungokwemvelo Nokukhokhelwayo
NgoLwesihlanu, Novemba 2, 2012 NgoMgqibelo, Januwari 14, 2017 Douglas Karr
Noma ngabe uyabazisa noma cha, i-Google ingumnikazi wenkundla yokudlala okumele ukuthi abathengisi basebenze kuyo. Noma kungukukhangisa okukhokhelwayo nge-Google noma ukufakwa kwezinto eziphilayo enjini yokusesha, ungahle ukubukele phansi ukufinyelela kwe-Google. Le infographic evela ku-Wordstream ikubeka konke ngombono.
Kusukela I-Wordstream Infographic Facts: Ucwaningo lwethu lwe-infographic lufake ngaphezu kwama-akhawunti we-AdWords angaphezu kuka-2,600 asebenzisa i-AdWords Grader ku-Q3 2012. Ama-akhawunti esewonke amelwe ngaphezu kwezigidi ezingama- $ 250 ezisetshenzisiwe ngonyaka. Sasinama-akhawunti anezinhlobo ezahlukahlukene zokusebenzisa imali; amanye ama-akhawunti abemancane kakhulu, esebenzisa ngaphansi kwe- $ 100 ngenyanga ku-AdWords. Ezinye zazinkulu kakhulu, ezinye zichitha kuze kufike ezigidini ngenyanga ku-AdWords. Ukuhlaziywa kubheke ama-akhawunti kuyo yonke imboni, futhi kwavela kuwo wonke amazwe lapho iGoogle yenza khona ibhizinisi.
Imininingwane yalokhu okuthunyelwe kubhulogi ivela ocwaningweni lwakamuva lwe-Wordstream ku Izibalo zewebhu zeGoogle, esisithatha njengesinye sezifundo ezibanzi kakhulu ekusebenzeni kwangaphakathi kwezikhangiso zeGoogle ezake zenziwa.
Tags: izikhangiso ze-googlei-google ppcgoogle seoGoogle +ukusesha okuphilayoukhokha ngokuchofoza ngokukodwaukusebenzisa ngokugcwele injiniseo
I-Pinfluencer: Ukumaketha kanye ne-Analytics kusuka ku-Pin kuya ekuthengeni
Izinyathelo ezi-5 zokwandisa iTraffic nokuguqula ukuhola kube ngamakhasimende
Nov 3, 2012 ngo-1: 32 AM
I-Thnks yolwazi infographics. Angilindeli ukuthi iwebhusayithi yokuthenga / ye-ecommerce ize kuqala. Engikulindele ukuthi i-ecommerce iza kuqala iqokelwe izimboni zezokuvakasha.